छ भन्दा सय गीतहरू, चलचित्र मा 30 भूमिकाको, को Taganka थिएटर र सोभियत संघ को राज्य पुरस्कार को दृश्य देखि 15 अविस्मरणीय चित्र, निस्सन्देह, यो सबै उसलाई बारेमा ... posthumously पाए। तर यो अझै पनि छैन केहि, त्यसैले धेरै अनुहारहरू र अनपेक्षित जीवनी Vysotsky भन्न भएन। प्रेम उहाँलाई त्यसपछि, अझै पनि यो दिन प्रेम, आफ्नो गीतहरू शिक्षाविद् र ट्याक्सी चालक, व्यवसायी र शिक्षक उत्तिकै परिचित छन्। आफ्नो आँखा दृश्य गर्न RIVETED दर्शक mesmerized कि व्लादिमीर Semenovich को धेरै साथीहरू देख्यौं। र उहाँले प्रशंसा यो शक्ति, यो व्यर्थमा बर्बाद छैन। व्लादिमीर Vysotsky एक मिथक छ, 20 औं शताब्दीको एक पौराणिक कथा छ। , मास्को को सरहद देखि एक सरल केटा गितार साथ सशस्त्र रूपमा, म सम्पूर्ण देश प्रेम जीत गर्न सक्षम थियो?
बाल्यकाल र युवा
Volodya 25 जनवरी, 1938 मा मास्को मा जन्म भएको थियो। उहाँले शान्त र docile बच्चा भयो। सँगै आफ्नो आमा, Ninoy Maksimovnoy, साथै अन्य सदस्यहरु संग, त्यो एउटा unheated 1st Meshchanskaya सडक मा पुरानो घरमा बस्थे परिवार धेरै भद्र जीवन नेतृत्व। आफ्ना पिता - Semyon Vysotsky - एक signalman रूपमा सेवा, दोस्रो विश्व युद्ध थियो कर्णेल श्रेणी थियो। युद्ध पछि तिनीहरूले बर्लिन नजिकै एउटा सानो सहरमा बाँच्न सारियो, र पछि आमा मास्को फिर्ता केटा ल्याए। स्कूल पछि, Volodya चूहे मा मेकानिक्स मा शिक्षा प्राप्त गर्न चाहन्थे। उहाँले त्यहाँ पनि भयो। तर थिएटर उहाँलाई थप, त्यसैले, होने अध्ययन पहिलो स्थान हालियो आकर्षित उहाँले मास्को कला थियेटर आफूलाई समर्पित।
काम को प्रथम स्थान मास्को थिएटर थियो। Pushkin, अभिनेता इच्छुक जहाँ, दुर्भाग्य, मा बुझिएन। तर 1964 मा, व्लादिमीर Vysotsky को जीवनी यो Taganka थियेटर को troupe लिइएका छ भनेर घुमाइन्छ। यो स्थान एक मनपर्ने उहाँले दुई भन्दा बढी दर्जन भूमिकाको प्ले जहाँ, उहाँलाई लागि काम थियो। निर्देशक Lyubimov व्लादिमीर Semenovich साथी थिए, र आफ्नो रचनात्मक विचार समर्थित र एक अभिनेता रूपमा र एक कवि रूपमा।
Volodya एक प्रारम्भिक उमेर देखि कविता लेखे, र यो 1961 मा लिखित पहिलो गीत थियो। आफ्नो जीवन जीवनी र किनभने, आफ्नो गीतहरू लगाया जान सक्छ Vysotsky को रचनात्मकता सधैं लिङ्क गरिएको तिनले यस्तो लेखे र उहाँले अनुभव के गाए। यार्ड hooligan पद सुरु, उहाँले गीत मार्फत मानिसहरूको प्राण नियन्त्रण गर्न आफ्नो क्षमता विकास गरे। आफ्नो मुग्ध पार्ने संगीतको विनोदी पदहरू, Fables र दन्तिये, marches र गीत पाउन सकिन्छ।
जीवनी Vysotsky, अभिनेता
उहाँले फिलिमहरु लागि बनेको। Vysotsky आफूलाई फिल्म3दर्जन भूमिकाको प्ले। "ठाडो", "साना विपत्ति आइलाग्यो", "त्यहाँ दुई comrades थिए" - दर्शक अझै पनि तिनीहरूले प्ले अक्षरहरू तस्वीर यी गति आकर्षित छ।
व्लादिमीर Vysotsky: पछिल्लो केही वर्ष एक जीवनी
जुन 1969 मा, व्लादिमीर Semenovich अनुभव छ नैदानिक मृत्यु। मेरिना Vlady - त्यतिबेला उहाँले आफ्नो भविष्य पत्नी को एक चिन्ह रूपमा पहिले नै2वर्ष थियो। त्यसै वर्ष को डिसेम्बर मा, जोडी विवाह प्ले। फ्रान्स र Vysotsky पनि सजिलै प्रशंसक जित्छ जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, गर्न marina पति निर्यात। आफ्नो अन्तिम5वर्ष उहाँले तिनी र तिनकी पत्नी विनियोजन राज्य छ जो घर, को साना Georgia सडक मा बस्ने भएको छ। दोस्रो नैदानिक मृत्यु Stelmakh सही त्यहाँ भ्रमण को समयमा, 1979 मा Bukhara मा समातिए।
1980 कलाकार लागि घातक भयो। उहाँले Bolszewo मा एक कन्सर्ट खुसी र अन्तिम पद पछि छोड्ने, Hamlet आफ्नो प्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अन्तिम पटक थियो: "अनि बरफ को तल र कठिन श्रम माथि ..."। जुलाई 25 4:00 AM 10 मिनेट मा उहाँले गएको थियो ....
"पोडियम" - सुंदरियों को एक समूह
आधार गिटार ध्वनि - स्केल सेट
जनसंख्या जनगणना। पहिलो जनगणना
किन मत्स्यांगना पुरुष र महिला को सपना?
भूगोल सिक्ने: Primorsk को शहर कहाँ छ?
कहिले र कसरी धरती गरे
सृष्टिको इतिहास र कविता को विश्लेषण "बादल" Lermontov
एक कुर्सी, उचाइ समायोज्य कसरी चयन गर्ने?
Deism - यो के हो? दर्शन मा Deism
पातलो शरीर मालिश
माटोको ईटा। आवेदन र ग्रेड ईटाहरु को क्षेत्रहरु